कसैलाई प्रपोज गर्न सक्दिन म: गायिका मेलीना राई – Rastriyapatrika
कसैलाई प्रपोज गर्न सक्दिन म: गायिका मेलीना राई
मेलिना राई छोटो समयमै चर्चाको पात्र बन्न सफल गायिका हुन । चलचित्र पाश्व गायनमा उनले गाएको फिल्म नाई नभन्नु ल ३ को कम्मर माथी पटुकी बोलको गीतले उनलाई एकाएक चर्चामा ल्यायो । लगत्तै नम्रताका लागि गाएको क्लासिकको प्रकृतिको सुन्दर बोलको गीतबाट थप चर्चा पाएपछि, पाश्र्व गायनमा उनको सम्भावना झन् बलियो भएको छ । यस अघि उनले गाएको पल भरमै खुसी बोलको गितले जति चर्चा कमायो त्यति मेलीनालाई भने चर्चा दिएन । हाऊ फन्नीको शिरैमा शीरबन्दी, नोभेम्बर रेनको पल भरमै खुसी , नाईके को लोभी भमरा , पुन्टे परेडको डुब्दै गएं म जस्ता गीत गाउदै दर्शक श्रोताको मन जितेकी मेलीना अहिले आफ्नै एल्बमको तयारी मा जुटेकी छिन । उनैले गाएको तिमीले बाटो फेर्यौ अरे बोलको गीत अहिले चर्चामा छ । अहिले उनी सिनेमासँगै, आफ्नै एल्मबको गीतसंगीत रेकर्डमा ब्यस्त छिन ।
अहिले म मुभीको पनि काम गरीरा’को छु । मेरो नयाँ एल्बमको पनि तयारी हुँदैछ मेरो आफ्नै प्रोजक्टबाट । अनि कलेक्सन एल्बममा पनि गीत गाईरा’को छु । समग्रमा भन्नुपर्दा म्युजिकमै ब्यस्त छु ।
अब आउने एल्बम कस्तो एल्बम हो ?
यो एल्बममा सबै प्रकारको गीतहरु राख्ने तयारीमा छु । रोमान्टिक, स्याड, डान्सीङ गीतहरु सबै हुनेछन् । एल्बमको नाम मेरै नामबाट राख्ने तयारीमा छु ।
गर्मीको योजना के छन् ?
गर्मी मलाई मन नपर्ने सिजन भएपनि लाईफमा हरेक कुराको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्छन् । मलाई मन नपर्ने समय भनेकै गर्मी हो । त्यस्तो धेरै योजना त खासै केहि छैन ।
गर्मीमा कस्तो खानेकुरा खानुहुन्छ ?
जुस,फलफुलहरु धेरै खान्छु म ।
ड्रेस कस्तो लगाउनुहुन्छ ?
ओपन ड्रेसअप गर्छु म गर्मीमा । मलाई सजिलो लाग्छ । शरीरलाई सुहाउँदो, गर्मी धान्ने खालको मात्र लगाउँछु ।
सेलिब्रेटीहरुको लागि गर्मी महिना ग्ल्यामरस महिना पनि भनिन्छ नी , तपाई कसरी लिनुहुन्छ यसलार्ई ?
सेक्सी , हट देखीने कुरालाई ग्ल्यामरस भन्नुभन्दा पनि आाफ्नो व्यक्तित्व राम्रो देखाउने कुरालाई नै ग्ल्यामरस भन्छु म । गर्मीको समयमा यस्तो कपडा लगाउनु भनेको सामान्य हो ।
मेकपमा कतिको ध्यान जान्छ ?
कार्यक्रमहरुमा हिँड्दा मात्र मेकअप गर्छु म । नत्र अरु समयमा खासै मेकअप गर्दिन ।
ब्युटीपार्लर महिनामा कति पटक जानुहुन्छ ?
म आवश्यक परेको बेलामा मात्र जान्छु ।
केमा धेरै खर्च गर्नुहुन्छ ?
ड्रेसअप र मोवाईलको नेटमा । ईन्टरनेट धेरै चलाउँछु म ।
रमाईला अनि नरमाईला पलहरु सम्झीनु पर्दा ?
रमाईला पलहरु त धेरै नै छन । स्पेसल्लि म म्युजिककै कामहरुमा हुदा धेरै रमाउने गर्छु । जस्तै, रेकर्डिङ्, प्रोग्राम, म्युजिकल ईन्भारामेन्ट सबै । म सधै म्युजिकमै रमाउछु । । तर मेरो नरमाईलो पल भनेको मेरो हजुर आमा बित्दाको पल । म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिन ।
तपाई गायन क्षेत्रमा नभएको भए कुन क्षेत्रमा लाग्नु हुन्थ्यो ?
डान्सिङमा हुन्थेँ होला म ।
अभिनय र गायन क्षेत्रलाई संगै लाने योजना पनि बनाउनु भएको छ की ?
अब अभिनय पनि यही क्षेत्रमा पर्ने हो । तर मेरो लागि गायन क्षेत्र ठूलो हो र अफर आए पनि अभिनयमा लाग्दीन होला सायद । म मेरो गायन क्षेत्रलाई नै राम्रोसंग अगाडी ला’न चाहन्छु ।
तपाईको बुझाईमा प्रेम के हो ?
प्रेम बीना त संसार नै अधुरो छ । प्रेम सबैमा जरुरी हुन्छ तर त्यसलाई कस्तो रुपमा लिने भन्ने कुरा हो । तर म त्यस्तो विशेष लभमा छैन र लाईफ पार्टनरको बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन । अब कोही मनपर्ने भन्ने कुरा त भै’हाल्छ नी ।
प्रपोज कत्तिको आयो ?
बच्चा बेलामा त म एकदमै सोझी थिएँ । कहां प्रपोज गर्न सक्छु र ? अहिले पनि त्यो मामलामा त सोझी नै छु । धेरै सोझी मान्छेलाई हेर्दैनन् केटाहरुले .हाहाहा… । म स्कूल पढ्दा लामो फ्रक लगाउने , दुईचुल्ठी बाट्ने गर्थेँ । त्यसैले पनि कोही केटाहरुले मसंग बोल्दैन’थे । कसैले पनि वास्ता दिदैनथे ,मैले पनि वास्ता दिदैनथें । अहिले पनि कसैलाई प्रपोज गर्न सक्दिन म, तर अरु बाट आएको प्रपोजलाई पनी सिरिएसल्लि लिन सकेको छैन , किनभने अहिले म कम्प्लिट्ली म्युजीकलाई नै फोकस गर्न चहान्छु ।
कस्तो जीवनसाथी बनाउन चाहनुहुन्छ ?
मलाई यस्तो जीवनसाथी हुनुपर्छ भन्दा पनि , मेरो फिल्डलाई माया गर्ने सम्मान गर्ने । बुझ्ने र मलाई माया गर्ने मान्छे मनपर्छ ।